Nagu saabsan - Shiinaha Ningbo Cixi LGGB Bearings Co., Ltd.
Shiinaha Ningbo Cixi LGGB Bearings Co., Ltd. waxay ku taalaa Cixi Ningbo, Zhejiang Povince., Waa soo saare ku takhasusay jihada.
LGGB waxay leedahay gaadiid ku habboon, oo ku yaal bangiga koonfureed ee Hangzhou Bay, oo 60 km u jirta bariga Ningbo, 148 km u jirta woqooyiga Shanghai, 138 km u jirta galbeedka Hangzhou. Boosku wuxuu ku yaal bartamaha Triangle-da dahabka ah ee Shanghai. , Hangzhou iyo Ningbo, oo ah dhaqaalaha ugu ballaaran magaalooyinka Hangzhou Bay, garabka koonfureed ee gobolka Yangtze River Delta.
Waxaan ku kala soocnay suuqa sida jawaab celin, wax soo saar wax ku ool ah oo tayo sare leh, alaabooyin la isku halleyn karo oo aan qaali ahayn oo adduunka oo dhan ah, Bariga Dhexe iyo Koonfur Bari Aasiya, Koonfurta Ameerika, Yurub iyo wixii la mid ah
Shaqaalaheennu waxay caan ku yihiin ballanqaad iyo heerka adeegga macaamiisha ee warshadaha. Waxaan ururinay heer sare oo khibrad injineernimo ah waxaana dhisnay Xarun Xakamaynta Tayada oo heer sare ah, ujeedkuna waa sida noosameeyada LGGB Bearings waxay leeyihiin tayo aad ufiican oo qiimo leh tartankeena. badeecadaha iyo qiimaheena tartanku wuxuu kuu keydinaa kharash badan.
Waxaan had iyo jeer u abuurnaa qiime macaamiisha!